Ndị na-emepụta ngwaahịa, ndị na-enye ha | China Ngwaahịa Factory
Welded Waya ntupu ka nke elu àgwà ala carbon ígwè waya ahiri ịgbado ọkụ, na mgbe ahụ na-ekpo ọkụ tinye kpaliri, ịkwanyere ntekwasa plastic elu plasticizing ọgwụgwọ.
Iji rute ntupu elu ewepụghị, edo ntupu, obodo machining arụmọrụ dị mma, mụ, ezi ihu igwe na-eguzogide, ezi corrosion mgbochi.
Weld waya waya ntupu style:
* Hot tinye kpaliri mgbe ịkpa ákwà.
* Hot kpoo kpaliri tupu ịkpa ákwà.
* Electro kpaliri ya mgbe ọ kpachara akwa.
* Electro kpaliri tupu ịkpa ákwà.
* PVC ntekwasa.
* Igwe anaghị agba nchara.
Ngwa ji galvanized ígwè na ntụ ntụ ntekwasa na-eme ka ha na-eguzogide ọgwụ na-adịgide adịgide.
Nsu ya na scrolled n'elu maka ochicho mma, green green plastic ntekwasa na galvanized waya, Tumadi eji maka ubi mma.
Ihe: Mae nke elu mma ígwè waya.
Nhazi: Wekpa ákwà na ịgbado ọkụ
Product uru Anti-corrosion, afọ iguzogide, anwụ na-egosi, wdg
A na-eji waya waya rụọ nnukwu mgbidi. Ọ bụ ogige kachasị mma maka ichebe ahịhịa, oke ọhịa, okporo ụzọ na gburugburu.
Na ngụkọta, uto nke akụkụ anọ, nke a na-ejikarị eme ihe maka osimiri, mkpọda akụ, Ọ nwere ike igbochi ikpere mmiri site na ikuku, ebili mmiri na ebili mmiri. na-enwe mgbanwe na-agbanwe agbanwe na ikike na-agbanwe agbanwe, nke na-enye aka ịkwalite uto ngwa ngwa nke ahịhịa sitere n'okike.
Square Waya ntupu ka nke galvanized ígwè waya ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara waya, ọ na ọtụtụ-eji ụlọ ọrụ na-ewu na myọ ọka ntụ ntụ, iyo mmiri mmiri na gas maka ndị ọzọ na nzube dị ka mma nche na ígwè enclosures.
Square Waya ntupu ụdị:
Hexagonal Waya ntupu eji maka nri ọkụkọ, ọbọgwụ, ọgazị, rabbits na ngere nke zoo, wdg. Waya netting na hexagonal oghere awade ezi ventilashion na fencing ojiji.
Enwere ike ịmepụta ya n'ime igbe gabion - otu n'ime ngwaahịa waya ndị kachasị ewu ewu maka njikwa ide mmiri. Mgbe ahụ, a na-etinye nkume n'ime ya. Tọ gabion mee mgbidi ma ọ bụ ụlọ akụ megide mmiri na idei mmiri. Igwe anaghị agba nchara hexagonal Waya ntupu na-welded n'ime ulo ozuzu okuko netting maka ozuzu nke ọkụkọ na ndị ọzọ na ulo ozuzu okuko.
Ejiri ihe eji arụ ọrụ kachasị elu na usoro ịgbado ọkụ mee ibo ụzọ. Weld tupu mkpuchi maka nchedo dị elu megide ihu igwe nwere otu nkwụsị nke corrosion dị ka ogwe nsu. Ọnụ ụzọ ámá anyị gụnyere ihe dị elu ma na-adịgide adịgide na ọtụtụ nhọrọ mkpọchi iji kwado ngwa dị iche iche.
Gatedị Ọnụ zọ Gardenmá Ogige:
* Ọnụ ụzọ nku nku.
* Ugboro abụọ nku ọnụ ụzọ ámá
Common Ntu dayameta: 1.2mm-6.0mm Ogologo: 25mm (1 anụ ọhịa) -152 mm (6 sentimita asatọ) Ihe: Q195 Ọgwụgwọ ihu: Nhicha, Zinc plated / Black Zinc Plated Mbukota nkọwapụta: 1.In nnukwu 2. The commodity mbukota 3 Mbupu Mbupu: katọn nke 25 kg / CTN, wdg 4. Dị ka arịrịọ ndị ahịa si dị. Concrete Ntu dayameta: 1.2mm-5.0mm Ogologo: 12mm (1/2 sentimita asatọ) - 250mm (10inches) Ihe: # 45 nchara Mkpa ọgwụgwọ: Zinc, Black Zinc Plated / Black Zinc Plated Mbukota nkọwapụta: 1 ....
Ọ bụ onye na-arịgo ugwu maka osisi osisi vaịn na ịrị ugwu. A na-ejikarị ya eme ihe na griin haus, ahịhịa osisi, osisi ndị a na-etinye n'ime ụlọ, okooko osisi n'ogige na nhazi ala n'ihi mgbanwe ya na ụdị dịgasị iche iche, ogologo oge, na-ehicha ya na ọdịdị ahụ ma na-ekwe omume.
Ngere post: A na-eji posts nsu rụọ ọtụtụ ọrụ n'èzí site na decks na fences.
Typedị nzipu ozi: Euro post, T post, Y post, U post，Star picket.
Euro Pipe Post bu mee okirikiri tube, kpaliri ya na ntụ ntụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ RAL6005.
Barbed waya bụ ụdị nke iche na nchedo net nke etinyere site na usoro ịkpa ákwà dị iche iche site na waya ikuku na-adụ na isi waya (eriri) site na igwe waya waya.
A na-eme ka usoro ọgwụgwọ dị n'elu ma kpuchie PVC.
E nwere ụdị atọ nke waya nwere ogwu:
* Single kpara akpa barbed waya
* Ugboro abụọ gbagọrọ agbagọ waya
* Omenala gbagọrọ agbagọ waya